SAWIRRO:-Al-shabaab oo gaadiid ku gubay waddo halis ah, xili ay kusii… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
SAWIRRO:-Al-shabaab oo gaadiid ku gubay waddo halis ah, xili ay kusii…
Ardaan Yare 9 January 2021
Ilaa saddex Baabuur oo kuwa nooca xamuulka ah, islamarkaana waday shixnado Ganacsi ayaa lagu gubay agagaarka deegaanka Yaaqbiriweyne ee Gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay sheegayaan wararka aan halkaas ka heleyno.
Gaadiidkaan oo ka baxay Magaalada Muqdisho ayaa u kala rarnaa Gobolada Baay, Bakool iyo Gedo, waxaana gubay rag la sheegay in ay ahaayeen tuugo dhabba gal ah oo dadka safarka ah dhaca.
Mid ka mid ah Ganacsatadii uu raranaa gaadiidka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in baabuurtaan la gubay, kadib markii darawaladii waday ay burcadda ka baxsaseen si aan loo furan.
Sidoo kale dableyda hubeysan oo la rumeysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ayaa la sheegayaa in ilaa 6 gaadiid iyo darawaladii waday ay af duubteen kadibna ka qaateen lacag madax furasho ah oo dhan 8 kun oo dollar.
Dhinaca kale ku dhawaad 60 gaadiid oo nooca xamuulka ah iska markaana shixnado ganacsi u wado gobolada dalka ayaa haatan ku xayiran degmada Afgooye sababo la xiriiro amaanka waddada.
Gaadiidleyda ku safar waddada xiriiriso Muqdisho iyo gobolada Jubbooyinka, Gedo, Baay iyo Bakool ayaa dhibaato ku qaba Kooxo hab beeleed u abaabulan oo is baaro dhigto waddada.
Midowga Musharaxiinta oo Jawaab kulul siiyay Madaxweyne Qoorqoor